Livestorm: Mee atụmatụ, gbue, ma bulie atụmatụ Inbinund Webinar gị na Inbound | Martech Zone
Livestorm: Mee atụmatụ, gbue, ma bulie atụmatụ ịntanetị Inbound gị
Tọzdee, Disemba 3, 2020 Tọzdee, Disemba 3, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na onwere ụlọ ọrụ gbawara na uto n'ihi mgbochi njem na mkpọchi, ọ bụ ụlọ ọrụ ihe omume ịntanetị. Ma ọ bụ ogbako n'ịntanetị, ngosipụta ahịa, webinar, ọzụzụ ndị ahịa, usoro ịntanetị, ma ọ bụ naanị nzukọ dị n'ime… ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-etinye ego na nzuko nzuko vidiyo.
Inbound azum na-chụpụrụ site webinars n'oge… ma ọ bụghị dị mfe dị ka ọ na-ada. Mkpa ichikota ma ọ bụ ịhazi na ọwa ahịa ndị ọzọ, nbudata ngwanrọ na ndakọrịta, peeji nke ọdịda, ngwanrọ njikọta ngwanrọ, ngwanrọ vidiyo, na nchịkọta nyocha ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa iji wuo usoro ntanetị na-enweghị ntụpọ site na mmalite ruo na njedebe.
Livestorm: Na-achọ, Live, na Webinars na-akpaghị aka
Livestorm wuru ngwa dị mfe, mara mma, ka mma, webinar sọftụwia nke lekwasịrị anya na ahụmịhe onye ọrụ, nghọta ahịa, na akpaaka.
Nwere ike iji ụdị sọftụwia ọ bụla sụgharịa sọftụwia:
Webinars Live - Livestorm bụ ihe nchọgharị dabere na HD, na-achọghị ka nbudata ngwanrọ ọ bụla. Na, ọ na-enyere nkesa ihuenyo, Youtube ma ọ bụ iyi ọ bụla ọzọ aka-abanye n'ime webinar gị.
Webinars na-emegharị ọnụ - Nabata otu webinar na otutu nnọkọ ma debe otu ibe ọdịda. Ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ ụbọchị ịhọrọ site na ibe ndebanye aha gị.
Akwụkwọ Webinars ndị edekọburu - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ahụmịhe webinar na-enweghị ntụpọ, otu ụzọ iji mee nke a bụ iji dekọọ ma bulite webinar gị ka ọ kpọọ ndị na-ege ntị. Naanị kụọ egwu!
Na-Ina Webinars - Bulite webinar gị ma mee ka atụmanya lelee vidiyo gị mgbe ha chọrọ.
Nke kachasị mma, enweghị oke nchekwa maka ịkọgharị webinars gị!
Atụmatụ Livestorm Gụnyere
Ndebanye aha Webinar - ahaziri iche ma ọ bụ ndebanye peeji nke na-wuru nri na. Tinye ọzọ ubi ka prequalify gị atụmanya. Younwere ike ịgbanye ụdị dị na weebụsaịtị gị.
email Marketing - Bubata kọntaktị gị, zipu ịkpọ oku email ahaziri iche, wee zipụ ihe ncheta maka ndị na-edebanye aha gị ịga,
Mkparịta ụka nke ndị na-ege ntị - ikori, ntuli aka, ajụjụ na azịza, ma na-aga n'ihu ndị niile nwere ike soro na webinar gị oge.
akuko - Weghara isi iyi nke ndebanye aha na ndị na-ekwu okwu, lee ndị na-eme ihe ndozi, soro egwu, ma lelee profaịlụ profaịlụ maka webinar gị.
Mmejuputa Mmeju - Tinye Google Analytics, Intercom, Drift, ma ọ bụ ihe ọ bụla ederede mkpado na ibe ndebanye aha gị.
Mmekọrịta - Wepụ ihe niile edepụtara aha gị, nzaghachi ntuli aka, data nchịkọta, ma ọ bụ tinye ya na Zapier, Slack, Email Marketing, Ahịa akpaaka, Ibe ọdịda, Payzọ mentkwụ ,gwọ, Mgbasa Ozi, Mkparịta ụka Live, ma ọ bụ tinye aka na CRM site na ntinye aka na Salesforce , Microsoft Dynamics, Pipedrive, Onye ahịa, Zenkit, ma ọ bụ SharpSpring.
Webhooks na API - Jikọta Livestorm na weebụsaịtị ma ọ bụ ikpo okwu nke gị na API siri ike na webhooks ha.
Gbalịa Livestorm Maka Free Ugbu a
Ngosi: Abụ m mmekọ maka Ndụ.
Tags: inbound marketingNdụMicrosoft Dynamicsna-ina webinarsNa-agba ọsọpre-ndekọ webinarsugboro ugboro webinarsndị ahịaOnye na-ere ahịankọtọWebinarihe ncheta email webinarwebinar ahịaikpo okwu webinarndebanye webinarwebinarszenkit
Omnify: Ndenye Ntanetị, Ntinye akwụkwọ, na mentkwụ Platgwọ Platform
Nkọwapụta Ecommerce: Mmetụta nke Ọrịa na mkpọchi COVID-19 na Rlọ Ahịa na Ntanetị